Nepal Deep | केयर गिभरमा इजरायल जानेहरुको भाषा परीक्षा आज,नतिजा कहिले सार्वजनिक होला ?
केयर गिभरमा इजरायल जानेहरुको भाषा परीक्षा आज,नतिजा कहिले सार्वजनिक होला ?
काठमाडौँ। इजरायलको रोजगारीमा जान इच्छुक नेपालीका लागि आज भाषा परीक्षा हुँदैछ ।
भाषा परीक्षाका लागि काठमाडौँमा ११ वटा केन्द्र तोकिएका छन् । ११ ठाउँका १६ परीक्षा केन्द्रमा दिउँसो १ बजे भाषा परीक्षामा ३ हजार ७ सय २७ पुरुष र ३ हजार २ सय ८२ महिला रहने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।